ROSA Enterprise Desktọpụ X4 bịarutere na Kernel 4.15, KDE4 na ndị ọzọ | Site na Linux
ROSA Linux bụ nkesa Linux na sistemụ arụmọrụ, nke ụlọ ọrụ Russia LLC NTC IT ROSA mepụtara. Ọ dị na mbipụta atọ dị iche iche: ROSA Desktọpụ Fresh, ROSA Enterprise Desktop na ROSA Enterprise Linux Server, ezubere iche na nke ikpeazụ na azụmahịa ọrụ.
ROSA sitere na ndụdụ nke ugbu a French Linux na-ekesa Mandriva na kemgbe ahụ ọ mepụtara n'adabereghị.
Na mbu ebumnuche ya naanị maka ndị ọrụ azụmaahịa, mana na njedebe nke 2012 ROSA malitere nkesa nke onye njedebe ya, Desktọpụ Fresh.
Ihe nkesa dị iche iche na-eche ndị ọrụ Mandriva mbụ, dị ka OpenMandriva Lx ma ọ bụ MagOS Linux, dabere na ROSA.
1 Banyere ụdị ọhụrụ nke ROSA Enterprise Desktọpụ X4
2 Budata ma nweta ROSA Enterprise Desktọpụ X4
Banyere ụdị ọhụrụ nke ROSA Enterprise Desktọpụ X4
N'oge na-adịbeghị anya ụlọ ọrụ ROSA gosipụtara ụdị ọhụrụ nke ROSA Enterprise Desktop X4, dabere na ikpo okwu ROSA Desktop Fresh 2016.1 na desktọọpụ KDE4.
Newdị ọhụrụ a na-agbakwunye nkwado maka ọtụtụ nhazi ngwaike, mfe nke nwụnye ma jiri ọbụna maka ndị ọrụ na-amalite na Linux.
Mgbe ị na-akwadebe nkesa, A na-elebara nlezianya anya na nkwụsi ike n'ihi na ọ gụnyere naanị ihe anwale a nwalere na ndị ọrụ ROSA Desktop Fresh.
Ejiri usoro arụmọrụ rụọ ọrụ zuru oke na-arụ ọrụ na gburugburu ụlọ ọrụ yana enwere ike ijikọ ya na ngwaahịa ndị ọzọ nke STC IT Rosa mepụtara, gụnyere asambodo, nke na-enye ohere iwulite akụrụngwa nke mgbagwoju anya ọ bụla.
Nke ọhụrụ atụmatụ nke ROSA Enterprise Desktọpụ X4 na-egosipụta akara ọhụrụ nke kernel desktọọpụ nke dabeere na ROSA na Ubuntu patches n'ihi na mma ngwaike nkwado.
Na nke ndabara Kernel bụ Linux 4.15 na Ubuntu 18.04 patches ma na-agụnye atụmatụ ndị ọzọ dịka Ọnọdụ zuru oke na nkwado maka SELinux kama AppArmor.
Na ụdị ọhụrụ a nke nkesa ị nwere ike ịchọta ROSA Audit Viewer, nke bụ mmezu nke usoro ọrụ ụlọ ọrụ ROSA maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
N'ime nke a ị nwere ike ịchọta Nyocha abuo na nbanye iji melite nchebe data (nhọrọ).
Ọkachamara emelitere iji jikọọ na ngalaba Windows AD na njedebe nke ọtụtụ mpaghara.
Ọzọkwa onye nrụnye emelitere nwere ikike ịwụnye na NVme na M.2 SSD ma jiri F2FS, Btrfs na Zstd na nhazi ndị ọzọ na-abụghị ọkọlọtọ.
Versionkpụrụ bụ isi nke sistemụ arụmọrụ na-agụnye a dịgasị iche iche nke ngwa na-ekwe ka ị na-amalite na-arụ ọrụ ozugbo echichi: Ihe nchọgharị Firefox-ESR, Mozilla Thunderbird email ahịa, ụlọ ọrụ LibreOffice, GIMP na ndị ndezi ihe oyiyi Inkscape, onye editọ vidiyo KDEnlive, ndị ahịa izi ozi Pidgin, ndị egwuregwu na ngwa ndị ọzọ.
RED X4 kwekọrọ na ezinụlọ "1C" nke mmemme na ngwa ọrụ CryptoPro, yana ọtụtụ mmemme ndị ọzọ.
Ọhụrụ nke distro na-eji nsụgharị 4.15 nke Kernel, ọ bụ ezie na nsụgharị 4.18, 4.20 na 5.0 dịkwa na nchekwa.
Desktọọpụ KDE4 nwere ntinye nke mmemme KDE5 ọhụrụ, na-emelite nhazi ahụ ma jiri ihe ndị mepụtara maka ROSA.
A na-eme atụmatụ na ergonomics nke usoro ahụ n'ụdị ụlọ ọrụ, na-eji ihe omume na mmemme emepụtara maka ROSA: SimleWelcome, Klook, RocketBar na ndị ọzọ.
Njikwa sistemụ, gụnyere ịbanye na ngalaba Windows AD na FreeIPA, na-arụ ọrụ nke eserese eserese n'otu ogige njikwa KDE.
Emebere ihe nchọgharị Firefox-ESR n'ime KDE, agbanyeghị na enwere ike ịhọrọ ihe nchọgharị Yandex.Browser ka mgbakwunye.
A na-akwado mmemme Java site na iji java-1.8.0-openjdk arụnyere.
Budata ma nweta ROSA Enterprise Desktọpụ X4
Ihe oyiyi ROSA Enterprise Desktọpụ X4 na-adịghị n'ihu ọha dị na ha dị naanị ma ọ bụrụ na enyere ha iwu iche.
Nwere ike ịnweta ihe oyiyi nke usoro ahụ, naanị ị ga-aga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ọrụ ahụ ebe ị nwere ike ịchọta ozi iji rịọ maka onyonyo nke sistemụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » ROSA Enterprise Desktọpụ X4 bịarutere na Kernel 4.15, KDE4 na ndị ọzọ
Ebumnuche Linux na-achọ ịdị n'otu ụwa site na isi mmalite